आज बोल्न पाउनुमा अमेरिकामा सेल्फी खिच्नेको होइन बाबुरामको देन छ - Dainik Nepal
आज बोल्न पाउनुमा अमेरिकामा सेल्फी खिच्नेको होइन बाबुरामको देन छ
सरगम भट्टराई २०७५ भदौ ३१ गते १८:२९
काठमाडौं । हिजो मात्र अमेरिका भ्रमणका बेला टेक्सासमा केही नेपालीहरु(भारतीयसहित)ले कालो झण्डासहित तथानाम गाली गरेछन् । जुन निकै अभद्र र देशकै बदनाम गर्ने खालको थियो ।
म बाबुरामको युद्दकालीन राजनीतिको समर्थक होइन । व्यक्तिगत रुपमा उनको विद्वताको समर्थन गर्छु तर पनि परदेशी भूमिमा बसेर देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बदनाम गर्दै यो नाटक गर्नेको समर्थन गर्दिनँ । यतिसम्म तल गिरेर विरोध गर्नु बुद्धिमत्ता होइन । बाबुरामलाई सक्ने भए हेग अदालतमा हाज़िर गराऔँ ।
देशमा बस्न नसकेर विदेशी भूमिमा अरुकै गुलामी गर्न आएकाहरुले यति तल गिर्नु देशको चिन्ता भएर होइन हिट हुने स्टन्ट मात्र हो । सक्ने भए नेपालमै स्थायी रुपमा गएर कालो झन्डा मात्र होइन बाबुराम… हो भनेर आमरण अनसन गरौँ, आन्दोलन गरौँ ।
एक्लो बाबुरामलाई हत्यारा क़रार गरेर केही फाइदा छैन । हिजो मान्छे मर्नुमा एक्लो बाबुराम दोषी हो ? त्यसको जिम्मा तत्कालीन सरकारले पनि लिनुपर्छ/पर्दैन ? टाउकोको मूल्य तोकेको कसले हो नि ? किलो शेरा टुर अप्रेशन रोमियो चलाउने को हो ? तर पनि जनयुद्धको डिजाइन गरेको हुनाले उनी दोषी छैनन् भनेर म भन्दिनँ ।
हिजो ताक पर्दा उनलाई भोट हालेर कसले जिताएको ? संगै अबिर दलेर विजययात्रा कसले गरेको नि ? भरतपुरमा हँसिया हथौडामा भोट हाल्ने को हो ? सबै श्रृंखला हेर्दा काँग्रेस पनि कम ज़िम्मेवार छैन, आधा मान्छे मार्ने त काँग्रेस सरकार पनि त हो नि ! शेर बहादुरलाई भोलि हत्यारा भनेर यस्तै गरे भने नि ! ओलीका विरोधीले ओलीलाई झापामा टाउको काट्ने भनेर यसै भने भने ?
जे भए पनि देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई यसरी विरोध गर्नु मलाई राम्रो लागेन । आज कालो झण्डा देखाउन र बोल्न पाउने अवस्था ल्याउन बाबुराम भट्टराई लडेका हुन्, अमेरिका बसेर समुन्द्र किनारमा सेल्फी खिच्नेहरु होइनन् । देशको चिन्ता लागे सभ्य आलोचना गर्न पाइन्छ, जंगली पारा गर्न पाइँदैन ।
यद्यपी म पनि तत्कालीन जनयुद्धको किमार्थ समर्थन गर्दिनँ। जनयुद्ध धनयुद्ध बनेको र नेतृत्व तह निकम्मा भएकोले नै बाबुरामले नयाँ शक्ति खोलेको मेरो अनुमान हो । तर, बाबुरामलाई गरेको यो शैलीको विरोध अशिष्टताको पराकाष्ठा हो । यसले त हत्या नै माथ गर्छ ।
राजनीति त संस्कारको पो गर्नु यार ! यस्तो लाज मर्दों किन गरेका होलान् ! हत्याका आधा मतियार आफ्ना नेताहरु आउँदा पुच्छर लुकाएर काईँ काईँ गर्ने, एयरपोर्टमा माला लिएर लम्पसार पर्ने, सुटकेश लतार्ने, शहर घुमाउने, सेल्फी हान्ने, गिफ़्ट दिने । तर, विचरा एउटा सादगी नेता बाबुराम आउँदा भारतीय नागरिकसम्मको सहयोग लिएर हत्यारा भनिरहँदा इज्जत बाबुरामको होइन तिनै झुसिल्कीराहरुको गएको छ ।